ओलीले “हैसियत” देखाइदिएपछि प्रचण्डलाई बल्ल कांग्रेसको ‘घाँटी’ लाग्यो ! – yuwa Awaj
ओलीले “हैसियत” देखाइदिएपछि प्रचण्डलाई बल्ल कांग्रेसको ‘घाँटी’ लाग्यो !
कार्तिक २३, २०७७ आइतबार 0
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवादले शुक्रबारदेखि नयाँ रुप लिएको छ । दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत देखाउन खोज्द जिल पर्नुपरेको छ ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले हैसियत देखाइदिएका छन् । दाहालले धुम्बाराहीस्थित पार्टी मुख्यालयमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाएका थिए । सचिवालयको बैठकलाई ओली समूहले बहिस्कार गरिदिएको छ ।
ओली समूहले बैठक बहिस्कार गरिदिएपछि दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष दाहाल अनुहार कालोनिलो भएको छ । सचिवालयमा दाहाल बहुमतमा देखिएका छन् । दाहाललाई साथ दिँदै माधवकुमार नेपाल, झलानाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सचिवालयको बैठकमा उपस्थिति भएका थिए ।
९ सदस्यीय सचिवालयमा दाहालको पक्षमा ५ जना देखिएका छन् । ओलीको पक्षमा चार जना सदस्यहरू देखिएका छन् । ओलीलाई साथ दिनेमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल रहेका छन् । ती सबै मन्त्री छन् । ईश्वर पोखरेल उप–प्रधानमन्त्री रहेका छन् । विष्णु पौडेल अर्थ र रामबहादुर थापा गृह मन्त्री रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार ओलीले मन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्यहरूलाई धुम्बाराहीको बैठकमा नजान अघोषित रुपमा चेतावनी दिएका थिए । ओली समूहले बैठक बहिस्कार गरेपछि कुनै ठोस निर्णय नै नगरी दाहालको सचिवालय बैठक सक्किएको छ ।
बैठकले सचिवालय बैठकका लागि पुनः ओलीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारहरूलाई बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुरमा आफ्नो
छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेका दाहालले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेसँग गठबन्धन गरेका थिए । कांग्रेसलाई धोका दिएर गठबन्धन गरेका दाहालको बल्ल चेत खुलेको भनेर चर्चा हुन थालेको छ ।
Prevहाडजोर्नी दुखाइको अचुक औषधि जाइफल, यसरी प्रयोग गर्नुहोस ।(बिधि सहित)
Nextमाधव नेपालले भने : ओलीबाट अब नेकपाको नेतृत्व सम्भव छैन…हेर्नुहोस् ।
मन्त्री ज्ञवाली भन्नुहुन्छ : कालापानि लीपुलेक नक्सा र भू-भाग फिर्ता आइसक्यो…हेर्नुहोस् ।
सांसद शान्ता चौधरी भन्नुहुन्छ : नेताहरुको ध्यान राष्ट्र निर्माणको एजेण्डामा नभई पद प्राप्तिका,लागि मात्रै केन्द्रित देखियो !
धर्मशास्त्रका अनुसार आइतबार सूर्य देवताको पुजा गर्दा मिल्नेछ खुशी (25)
मनाङेबारे बाबुराम : रत्नाकरलाई बाल्मिकी बन्न किन नदिने ? (14)
२.	धर्मशास्त्रका अनुसार आइतबार सूर्य देवताको पुजा गर्दा मिल्नेछ खुशी (25)
६.	मनाङेबारे बाबुराम : रत्नाकरलाई बाल्मिकी बन्न किन नदिने ? (14)
८.	जसले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाए, करोडौंको सम्पत्ति कमाए (13)